Hetsiky ny fialan-tsasatra : ho kintan’ny « M’Dola Beach » i Has’n | NewsMada
Hetsiky ny fialan-tsasatra : ho kintan’ny « M’Dola Beach » i Has’n
Toerana mahasarika ny Malagasy i Mahajanga, rehefa fotoam-pialan-tsasastra toy izao. Maro ireo hetsika tontosaina any ho fampialana voly azy ireo ka anisan’ireny ny M’Dola beach. Ankoatra izay fampialana voly izay, sehatra iray hampahafantarana ireo kintana vaovaon’ny mozika malagasy koa io. Amin’ity 2016 ity, ohatra, hisongadina i Has’n. Ny mombamomba azy.
Has’n, mpanakanto andriambavilanitra avy any amin’ny faritra Atsinanana, ao Toamasina, raha ny marina kokoa. Andrianomenjarasoa Hasina ny tena anarany, saingy nisafidy ny Has’n amin’ny maha mpanakanto azy. Toy ny ankamaroan’ny tovovavy, efa tiany hatramin’ny fahazazany ny mihira. Nokolokoloiny teny izany ka nahatonga azy hanana feo miavaka, amin’izao fahatanorany izao.
Niditra eo amin’ny sehatry ny kanto i Has’n ny taona 2013, saingy mbola andrankandrana fotsiny ihany. Tamin’ny fiandohan’ity 2016 ity ny tovovavy vao tapa-kevitra fa hiditra amin’ny sehatry ny matihanina ary nisafy ny « variété » na ny hiramadinika, ahitana hira milantolanto, zouk love, sns.
« I Shyn sy Dat Kotry, hatreto, no mpamorona ny tononkirako, izay mivelatra amina lohahevitra maro, toy ny fitiavana, ny trangam-piarahamonina, sns », hoy i Has’n. Efa maromaro ireo hirany fa 10 mahery no efa masaka tsara, araka ny voalazan’ity mpanakanto ity hatrany. Efa manomboka hita sy mandeha amin’ny fahitalavitra eto an-dRenivohitra sy any amin’ny faritra ireo. Anisan’izany ny « Mangina », sanganasany voalohany, « Tsy tafasaraka », fampiaraham-peo tamin’i Dat Kotry. Hivoaka tsy ho ela kosa ny « Taratasy ho an’ andriamatoa filoha ».
Tsy havan’i Nina’s akory i Has’n
Maro ny milaza fa mitovy tanteraka amin’i Nina’s i Has’n. « Marihiko eto anefa fa ny endrika no mety mitovy fa tsy mpihavanana akory izahay », hoy i Has’n. Na izany aza, nofinofiny ny ho lasa lavitra, toa azy sy ireo mpanakanto malaza rehetra.
Hisy ny rindrantsary vaovao hivoaka ato ho ato, araka ny fampanantenan’ity mpanakanto ity. Eo ihany koa ny fandraisany anjara amin’ny hetsika « M’Dola Beach 2016 », any Mahajanga, manomboka ny 04 aogositra izao. Anisan’ireo kintan’ny mozika, andrasana amin’ity hetsika ity i Has’n. Aorian’izay, efa miketriketrika ny fivoahan’ny rakikira voalohany ny tovovavy.
« Betsaka ny mpihira eto amintsika fa vitsy ny mpanakanto, ka tokony hahay hankafy ilay kanto ny mpankafy », hoy i Has’n.